Iindidi ezahlukeneyo zeebhalbhu kwintengiso, yeyiphi onokuyikhetha? | Ukuhlaziywa okuluhlaza
UTomàs Bigordà | | Ukonga umbane, Uqoqosho lwaseKhaya, Yendalo
Kweli nqaku siza kuchaza umahluko iintlobo zebhalbhu, ezihlala zisetyenziswa emakhaya okanye eziofisini, zinezibonelelo kunye nezinto ezingalunganga.
1 Imiba yokuqwalaselwa ngaphambi kokwazi iintlobo zeebhalbhu:
2 Zithini iiLumens kwaye ungazibala njani
4 Iindidi zebhalbhu kunye neengcebiso zokubakhetha
4.1 Iibhalbhu eziphambili zeLed
4.2 Ezona zilungileyo ze-Eco halogen bulbs.
4.3 Iibhalbhu ze-Incandescent.
4.4 Iibhalbhu ezigqibeleleyo zeFluocompact.
5 Zeziphi iimpawu ekufuneka ziqwalaselwe?
Imiba yokuqwalaselwa ngaphambi kokwazi iintlobo zeebhalbhu:
1. Ukusebenza ngokukuko, Zeziphi ii-watts (w) ezisetyenziswa ziindidi ezahlukeneyo zebhalbhu zokukhanya.
2. Ubomi obuluncedo, ebhekisa kwixesha apho iintlobo nganye zebhalbhu zihlala khona.
3. UmbalaKuba ukukhanya okuza kukhupha kuya kuba tyheli okanye mhlophe kuxhomekeke ekukhetheni phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zeebhalbhu. Oku kuya kuxhomekeka kwitekhnoloji oyikhethayo, kuba inokuba yi-LED, i-eco halogen okanye i-fluocompact.
4. Imijikelo Zikwenye into ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa ukhetha phakathi kwazo zonke iintlobo zeebhalbhu ezikhoyo, kuba ibhalbhu nganye isungule ukuba mangaphi amaxesha anokuvulwa nokucinywa.
Enye into ekufuneka uyigcinile engqondweni kukuba kwi Ukonga umbane iibhalbhu siwabala ngokokwakho ukukhanya, ngeyunithi yokulinganisa ebizwa ngokuba “ukukhanya"Okanye"izibane”Echaza nje ubungakanani bokukhanya okubonisiweyo.
Endaweni yokuba kungasentla Iibhalbhu ezibengezelayo balinganiswe nge watts (W), ebonisa ukuba ingakanani umbane tya.
Zithini iiLumens kwaye ungazibala njani
Umbuzo wokuqala ekufuneka sizibuze wona kukuzibuza ukuba yintoni i-Lumen?
Izikhanyisi, iyunithi yeNkqubo yeMilinganiselo yeHlabathi yokulinganisa ukukhanya okukhanyayo, umlinganiselo wamandla okukhanya akhutshwa ngumthombo, kule meko ibhalbhu yesibane. Ibhalbhu nganye ekhokelwayo ihlala ivelisa phakathi kwe-60 kunye ne-90 lumens, ke sinokubala oko ibhalbhu ye-15W enye ye-LED Ndinganikezela nge Ukukhanya kokukhanya malunga ne-1050 lumens. Yintoni enokuthi ingaphezulu okanye incinci ibe kukukhanya okuveliswa yi-bulb incandescent eyi-65W.
Oku kulingana sisiphumo sale fomyula ilandelayo: Eyona ilumens = Inani leeWatts x 70.
Emva kwako konke oko kuchaziwe, sinokubona umzekelo osebenzayo ngakumbi oya kubandakanya nokwazi zingaphi iibhalbhu zokugcina amandla ezifunekayo yendawo ethile, enokuthi ibe naliphi na igumbi endlwini.
Oko kuthetha ukuba, ukuba igumbi likhanyisiwe ngebhalbhu yesibane Ukukhanya kwe-400, kunye negumbi legumbi ziisikwere ezingama-20, inqanaba lokukhanyisa liya kuba ngama-20 lx.
Ikhitshi: Isindululo sokukhanyiswa ngokubanzi siphakathi kwama-200 nama-300 lx, nangona sisebenza kwindawo ethile (apho ukutya kuyasikwa kulungiswa) inyuka iye kwi-500 lx.
Iindidi zebhalbhu kunye neengcebiso zokubakhetha
Iibhalbhu eziphambili zeLed
Ziyisichazi seLight Emitting Diode. Inkqubo ye- Iibhalbhu ezikhokelwayo Zezona zihambelana kakhulu nokusingqongileyo, kuba zibonisa ukhetho lwendalo kunye nokusebenza ngokufanelekileyo.
Kungenxa yokuba azikhuphi i-CO2 eninzi kwindalo esingqongileyo njengezinye iintlobo zebhalbhu, kananjalo musa ukubonisa tungsten okanye mercury.
Kananjalo ukuba sihlalutya i ezona mpawu ziphambili kuphawulwe ngentla, ubude beentlobo ezahlukeneyo zeebhalbhu, iibhalbhu ze-LED zinokusetyenziswa malunga neeyure ezingamawaka angamashumi amahlanu. Ugcino ngokwemeko yokusetyenziswa lungaphezulu kokubalaseleyo, kuba sizakube sisebenzisa malunga nama-80% ngaphantsi nayiphi na enye ibhalbhu yemveli.
Ezona zilungileyo ze-Eco halogen bulbs.
Ukukhanya ezikhutshwa zezi ndidi zeebhalbhu kungokwemvelo kwaye zivula kwangoko. Ngokubhekisele kubomi bayo obuluncedo, ihlala iyiyure ezingamawaka amabini, isebenzisa imvulophu isinye kwisithathu ngaphantsi Kunaleyo ye-incandescent, esiza kuphawula ngayo apha ngezantsi.
Ukulahleka kwamandla ngenxa yesiphumo sobushushu kufuneka kuthathelwe ingqalelo, kuba olu hlobo lweebhalbhu zokukhanya zikhupha ubushushu.
Ukusetyenziswa kwamandla yeyona nto iphezulu kuzo zonke iibhalbhu, esiza kubona kamva ukuba zibonisiwe Ibhili yombane.
Ngethamsanqa, ukusukela ngo-2009 ukubheka phambili ukurhoxiswa kolu hlobo lweebhalbhu zokukhanya kwiimarike, Ukunika indlela kwizisombululo ezingcono ezibonelela ngesiphumo esifanayo ngokukhanya, kodwa ngokusetyenziswa okuphantsi kakhulu. Kwangelo xesha linenani eliphezulu lemijikelezo, abavelisi ubushushu kwaye bavelisa kwakhona umbala ngokuchanekileyo.
Iibhalbhu ezigqibeleleyo zeFluocompact.
Ezi ntlobo zebhalbhu zaziwa njenge comsumption ephantsi; Ubomi obuluncedo obuphakathi kwamawaka asixhenxe ukuya kwishumi lamawaka eeyure, kunye nokutya phakathi kwe-75 kunye ne-80% yeepesenti ngaphantsi kweebhalbhu zesintu.
Ngokubhekiselele ekukhanyeni okubonelelayo, ezi iindidi zokugcina amandla iibhalbhu Azikhuthazwa kakhulu ukuba zisetyenziswe kwiindawo zokuhamba. Kuba ihlala ithatha imizuzwana embalwa ngaphambi kokunikezela nge amandla okukhanyisa kwakho.
Zeziphi iimpawu ekufuneka ziqwalaselwe?
a) Ixesha elithathayo ibhalbhu yesibane ukufikelela ukusebenza okuphezuluOko kukuthi, ijika ngokukhawuleza kangakanani.
b) I-angle yokuvula okanye ukukhanya kwesibane, oko kuthetha ukuba kwinqanaba elingaphantsi, ukukhanya kuya kugxila kwinqanaba elithile.
c) Ubomi obuluncedo bebhalbhu, okt iiyure zokukhanya kwebhalbhu.
d) Ukusuka kwimbono yobuhle, siya kuzinyamekela iifom. Singafumana iglobhu, ukujikeleza, ukujikeleza okanye iibhalbhu zamakhandlela.
e) Kukho iimilo ezahlukeneyo zebushing ngokuxhomekeke kububanzi bayo kunye uhlobo lomtya onayo.
f) Inani lamaxesha ibhalbhu yokukhanyisa inokuvulwa kwaye icinyweOko kukuthi, imijikelezo yabo.
g) Amandla okukhanya okanye okukhanya, ngendlela enokuthi ubuninzi be Izikhanyiso siya kufumana ukukhanya okukhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Iindidi ezahlukeneyo zeebhalbhu, yeyiphi oyikhethayo?
ISwitzerland ivote kwiprojekthi yokuvala izixhobo zayo zamandla enyukliya